Sein Lyan - စိ န် လျှံ: အမှတ်တရမှတ်တိုင်များ
Writer Sein Lyan Time 11:50 pm
ငှဲလျောင်း၊ ငှဲလျောင်း၊ငှဲလျောင်း... နာတွ
ဘယ်ရမလဲ ၄ ကွ
21 Jul 09, 23:27
ကိုလူထွေး: ငှက်ပျောသီးစားရင်း တရားထူးများလဲ ပွားများနိုင်ပါစေ...
21 Jul 09, 23:23
ကိုလူထွေး: ငှက်ပျောသီး မကျွေးရတာ ကြာပီ
21 Jul 09, 23:22
ကိုလူထွေး: မင်္ဂလာရှိတဲ့ မွေးနေ့ဖြစ်ပါစေလို့ ချစ်ကိုကြီး ကိုလူထွေးမှ ဆုမွန်တောင်းပေးပါတယ် ညီငယ် မောင်ငွေကိုင် (ခ) ငကြွား... အဲ... ဖိုးစိန်... မျောက်ဖိုးစိန်... ဇာတ်မင်းသားဖိုးစိန်
21 Jul 09, 22:39
ဇော်: စိတ်ကြည်လင်အေးချမ်းတဲ့ မွေးနေ့လေးကို ပိုင်ဆိုင်ရပါစေဗျာ။ မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ ကိုဂျီးစိန်။ =)
ဇော်: မွေးနေ့မှသည် အသက်ထက်ဆုံးထိအောင် စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာစွာနဲ့ ရှိနိုင်စေဖို့ ဆန္ဒပြုပါတယ် ကိုဂျီးစိန်။
21 Jul 09, 20:32
21 Jul 09, 20:29
ကျရေ: ပျော်ရွှင်ဖွယ်မွေးနေ့ကလေးဖြစ်ပါစေ စိတ်ရှုပ်စရာတွေ မြန်မြန်ပပျောက်ပါစေ အဆင်ပြေချမ်းမြေ့ပါစေ
ကိုမောင်ဟန်: Happy Birthday!!!!!!! http://www.123birthdaycards.com/cards/monkey_bday.htm
thetpaingthu: ကိုစိန် .. happy birthday
21 Jul 09, 19:22
ThihaThit: ချစ်စိန် happy birthday
21 Jul 09, 19:08
kaungkinpyar:ံHappy Birthday ပါ စိန်ရေ၊ ပျော်ရွှင်ဖွယ်နေ့လေး ပိုင်ဆိုင်ပါစေ
21 Jul 09, 18:52
၀သန်မိုး: ပျော်ရွှင်ဖွယ်မွေးနေ့ လေးဖြစ်ပါစေနော်
၀သန်မိုး: ဟက်ပီးဘက်ဒေးပါ ကိုကိုစိန်ရေ
pyestar: happy birthday nyi lay monkey pho sein :)
21 Jul 09, 15:52
မီးလေးဇာ: ငကြွားကိုလာဖတ်သွားပါတယ်ချင့် ကြိုတင်ဆုတောင်းပေးသွားတယ်နော် မနက်ဖြန်ကွန်မရရင် နောက်ကျမှာစိုးလို့ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသောမွေးနေ့လေးဖြစ်ပါစေနော်
့HAPPY BIRTHDAY သူငယ်ချင်းရေ။။
စိတ်၏ ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်၏ ကျန်းမာ ခြင်းများနှင့် ပြည့်စုံပြီး အလှူရေစက် လက်နှင့် မကွာ လှူနိုင် တန်းနိုင် ကျွေးနိုင် မွေးနိုင် စားနိုင်သောက်နိုင်သော ပုဂ္ဂိုလ်ထူး ပုဂ္ဂိုလ်မြတ် ဖြစ်ပြီး သကာလ ..
မိဘကျေးဇူး သူတထူးအား စောင့်ရှောက်ပြုစု ဖေးမ တွဲကူနိုင်သော ယောကျာင်္းကောင်း ယောကျာင်္းမြတ် တစ်ယောက် အဖြစ် အနာဂတ် နေ့ရက်ပေါင်း များစွာ ဖြတ်သန်းတင့်တယ် နိုင်ပါစေ ..
ပျော်စရာမွေးနေ့လေးကို သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ ဆုတောင်းတွေနဲ့ စည်စည်ကားကားနဲ့တွေ့ရတာ
မွေးနေ့ပါင်းများစွာမှာ အခုလို ချစ်တဲ့ သူယ်ချင်းတွေနဲ့
Happy Birthday! ပါ အကို
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေ့ါ..။ ဒီနေ့ ကစပြီးတော့ အသက်တစ်နှစ်ကြီးသွားပြီလေ..။ နောက်မှာကျန် ခဲ့တဲ့ မကောင်းတာတွေကို မေ့ပြီး..ရှေ့ ဆက်လို့ ..အကောင်းတွေနဲ့ ပဲကြုံနိုင်ပါစေပေ့ါဗျာ..။
ကိုဖိုးစိန်.. ဒီမွေးနေ့က စလို့ နှစ်တိုင်း မွေးနေ့တွေကို ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ
ဟောတော့ ဝက်သားဒုတ်ထိုးက ဘယ်ရောက်သွားတာတုန်း....england နဲ့ cyprus ကြားမှာပျောက်သွားပြီထင်ပ....
ကဲကဲ မွေးနေ့ ရောက်တိုင်း အရက်အတူတူသောက်ချင်တယ်ဗျာ
အတူတူ ကဲမယ် ဟုတ်ပြီလား
ချစ်ကို တစ်ခွက် ညီတစ်ဖလားပေါ့ နော့်
ဘယ်မှာလဲဗျ ကျနော်ပေးတဲ့လက်ဆောင်။ =(
မွေးနေ့မှာပျော်ရွှင်ပါစေ ကိုထောင်ရေ ဒီနေ့ကစလို့ နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတွေနဲ့အတူ ပျော်ရွှင်တဲ့ဘ၀ခရီးကို လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေ ကာယသုခ စိတ္တသုခ နှစ်ဖြာပြည့်ဝလို့ လုံးတိုင်းတာရနိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါစေ ကြံစည်သမျှတောင်းတ အရာရာအဖြာဖြာတို့ လျှင်မြန်စွာပြည့်ဝတဲ့ ကိုထောင် ဖြစ်ပါစေ...လို့နော်
အယ် .. အဟီး။
ကျနော့်မွေးနေ့လက်ဆောင်ပါတယ်ဟ။ အဲ့ဒါကို မမြင်ဘူး သေချာလဲမဖတ်ရသေးဘဲ သမန်ကာ လျှံကာကြည့်ပြီး နှုတ်ခမ်းစူလိုက်မိတာ။ အဟီး။
၁လိုချင်လို့ စောင့်ပါတယ်ဆိုမှ။ မွေးနေ့ဆုတောင်း ဖုန်းတွေလာနေလို့ ဖြေရင်း ၁၅ဖြစ်သွားတယ်။ အီးးး။
ကိုဂျီးစိန်။ မကျေနပ်ဘူး။ ဟင့်။
ဒီတစ်ခါပဲ ၁လိုချင်ခဲ့မိတာပါဗျာ။ =(
ဗျို့ ကိုကြီးစိန် မအိပ်ပဲနဲ့ ကွန်မန့်တွေ စောင့်ဖတ်ပြီး ရင်ခုန်နေတာလားဗျ ....
ကြည်နူးလို့လည်း မျက်ရည် ကျမနေနဲ့ဦးနော့ .... :)
ကျနော် စောစောလေးကပဲ သတိတရ နဲ့ အိပ်ယာက ထပြီး တစ်ခေါက်လာသေးတယ် ... ကိုကြီးစိန် တင်မထားသေးလို့ ပြန်အိပ်နေတာ .. အိပ်ယာထဲ ခဏ လှဲကာပဲ ရှိသေးတယ် .. ကွန်မန့်က ၁၇ ခု ရောက်နေပြီ ... တယ်လည်း လူချစ်လူခင်ပေါတဲ့ ကိုကြီးစိန်ပါလား :P
ကိုကြီးစိန်ကို ညနေက ပြောခဲ့သလိုပဲ ကျနော့်ဘ၀မှာ ကိုကြီးစိန်လို မာန်မာနကင်းတာ ရိုးသားတာ တစ်ခါမှ မတွေ့ဖူးဘူး ... ရိုးသားတဲ့သူ မာန်မာနကင်းတဲ့ သူကို အများ ချစ်ခင်ကြတာ မဆန်းပါဘူး ကိုကြီးစိန် .. လေးစားပါတယ်ဗျာ ....
ကိုကြီးစိန် တစ်ယောက် ကျန်းမာ ပျော်ရွှင်ပြီး လူဖြစ်ရကျိုးနပ်တဲ့ လူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါစေ...
မိမိအကျိုး အများအကျိုး သယ်ပိုးနိုင်တဲ့ လူသားတစ်ယောက် ဖြစ်ပါစေ လို့ ကျနော် ဆုတောင်းပါတယ် ...
ပျော်ရွှင်သေားမွေးနေ့ ပွဲ ဖြစ်ပါစေ
သူငယ်ချင်းမောင်နှမတွေ အများကြီးနဲ့ ပျော်ရွှင်ဖွယ်မွေးနေ့လေးဖြစ်ပါစေ ဖိုးစိန်ရေ. :D
22 July 2009 at 01:45
ဟတ်ပီဘတ်ဒေး ကိုဖိုးစိန် ....... မွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းမျာစွာ ပျော်ရွှင်ပါစေ၊ ချစ်တဲ့ မိသားစုနဲ့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေနိုင်ပါစေ။
22 July 2009 at 03:40
နောင်နှစ်များစွာ အမှတ်တရမှတ်တိုင်များ စိုက်ထူခဲ့နိုင်
ယနေ့ ကျရောက်တဲ့ ဘကြီးတော်ဖိုးစိန်၏ ၂၉ နှစ်မြောက်မွေးနေ့ မှစပြီး နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာ ပျော်ရွင်အေးချမ်းမှုများသာ တူးဖော်ရရှိနိုင်ပါစေ...
22 July 2009 at 03:55
ဒုတိယက တစ်ယောက်သောသူရဲ့ အ်ိမ်မှာ ကိုစိန့်အတွက် ထင်ပါရဲ့ .. သူဆုတောင်းထားတာ တွေ့လို့ ၀ိုင်းပြီး ဆုတောင်းပေးခဲ့တယ်.
22 July 2009 at 04:05
22 Jul 09, 03:43
စန္ဒကူး:ံbelated birthday wish.. မေလေး ဘလော့ comment မှာသီချင်းဆိုထားပေးတယ်.. မောလို့ ထပ်မဆိုတော့ဘူး..း)
22 Jul 09, 03:41
ကိုကိုသုန်: ကိုစိန် ဟတ်ပီဘတ်ဒေး ........ မုန့်ဝယ်ကျွေး....
22 Jul 09, 02:51
22 Jul 09, 01:41
wwkm: HAPPY BIRTHDAY TO U. :D
22 Jul 09, 01:13
မေလေး: Happy Birthday ပါ ကိုကြီးဖိုးစိန်။
22 Jul 09, 00:50
မိုးသောက်: ကိုကြီးစိန် ကျနော် ရောက်တယ်ဗျို့ .. ကွန်မန့် ရေးခဲ့တယ်နော့ .... ပျော်ရွှင်စေကြောင်း ဆုမွန်တောင်းပါတယ်ဗျာ :)
သမီးပျို: ရေးချိုးတာပြီးသေးဘူးလား အအေးပတ်တော့မှာပဲနော်
21 Jul 09, 23:48
mgnge: Happy Birthday ! Brother ;
နေဒေးသစ်: ဟီးပက်ဘေးဒက် ကိုကိုချိန်
21 Jul 09, 23:42
သမီးပျို: happy birthday နော်ကိုထောင်
ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ မွေးနေ့ မင်္ဂလာ ပါ မောင်ဖိုးစိန် ရေ ...
ခေါင်းကိုက်ခြင်း ဝေဒနာမှ ကင်းဝေးစေသောဝ် ။
ချစ်တဲ့သူတွေ နဲ့ကွေကွင်း ဆင်းရဲခြင်းမှ ကင်းဝေးစေသောဝ် ။
ကြံတိုင်းအောင် လို့ ဆောင်တိုင်းမြောက် စေသောဝ် ။
လိုရာ ဆန္ဒ ပြည့် ဝ စေသောဝ် .....
သြုံ။။ သျှရီ ။။ သျှရီ ။
ဒူ ဝေ ဝေ။
စည်တော်တီးပြီး ဆုတောင်း ပေးလိုက် ပါသည် ။။။
22 July 2009 at 04:23
ကိုကြီးဖိုးစိန် နေကောင်းကျန်းမာပြီး ချစ်တဲ့ မိသာစုနဲ့ အတူတူ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နေထိုင်နိုင်ပါစေ...
ဘာလက်ဆောင်မှ မပါပေမယ့် ရင်ထဲက ဆုတောင်ပေးသွားတယ်ဆိုတာ ရင်ဘတ်တူရင် ခံစားတတ်မှာပါ ဟိး)
ဟက်ပီးဘတ်ဒေးနော် ကိုကြွားစိန်..အဲ ကိုဖိုးစိန်..း)
ညီလေး ဖိုးစိန် ယနေ့မှသည် မမြင်နိုင်သေးသော ဟိုးအနာဂါတ်ဆီမှ ညီလေး၏ လိုချင်သော တပ်မက်သော အရာမှန်သမျှကို အတ္တ နဲပါးစွာစွာနဲ့ ရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ။
ဇူလိုင် ၂၂ မှာကျရောက်တဲ့ မွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွား ပျော်ရွှင်ဖွယ်မွေးနေ့များကို ဖြစ်သန်းနိုင်ပါစေနော်။
"HAPPY BIRTHDAY MGLAY PHOE SEIN"
ညီရေ နောက်ကျသွားတဲ့အတွက် စောရီးနော်... အချိန်တွေက မတူနောက်ပြီး ကျနော်လည်း အလုပ်နည်းနည်းများသွားလို့ဗျာ...
သူငယ်ချင်းတွေလည်း ဆုတွေပေးထားကြတာ တော်တော်လည်းစုံနေပြီ.... အရမ်းပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာမွေးနေ့လေးပါဗျာ...
မွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်း ၁၂၀ ကျော်သည့်တိုင် သူငယ်ချင်းရဲ့ လိုအင်ဆန္ဒတွေ တလုံး တခဲနဲ့ကို ပြည့်စုံပါစေဗျာ... :) :) :)
စိတ်ကူးနဲ့ အိပ်မက်တွေလည်း လက်တွေ့ဖြစ်ပေါ်ပါစေဗျာ....
ပျော်ရွှင်မှု အပေါင်းကို သရဖူဆောင်းနိုင်ပြီး စိတ်၏
အမြဲ ပျော်ရွှင် စိတ်ချမ်းမြေ့ပါစေ..
ရည်မှန်းချက်တွေ အမြန်ဆုံး အောင်မြင်ပါစေ လို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်း))
22 July 2009 at 06:55
ံHappy Birthday ပါဖိုးစိန်ရေ။ ကွန်နက်မကောင်းလို့ ခုမှ ရောက်လာရတယ်။ နောက်ဆုံးဖြစ်နေပြီထင်တယ်။ နောက်ဆုံးပိတ်အိတ်နဲ့ လွယ်ဆိုသလိုပေါ့နော်။
ဖိုးစိန်ရဲ့ ဒီနေ့ ကျရောက်တဲ့ မွေးနေ့ မှနောင်ရက်ပေါင်း များစွာကို ဆန္ဒတွေ၊ အိမ်မက်တွေအကောင်အထည်ဖော် ကာ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်နော်။
35 မှာမှ လာမန့်တယ်ကွာ။
ညီလေး မွေးနေ့မှသည် နေပတေါ နေ့တွေတိုင်း ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ။
ညီ့ အိပ်မက်တွေ လက်တွေ့တကယ် ဖြစ်လာနိုင်ပါစေဗျာ။
မွေးနေ့အိမ်မှာလူတွေများနေလို့ အခုမှပဲ အေးအေးဆေးဆေး ဆုတောင်းသွားပါတယ်...
စိတ်ကောင်းရှိပြီး ကူညီတတ်တဲ့ သူငယ်ချင်းဖိုးစိန် မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ရသလို နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာလည်း
ပျော်ရွှင်ပါစေ..အဆင်မပြေမှုတွေ ကြုံလာခဲ့ရင်လည်း ခဏအတွင်းပြေပျောက်သွားပါစေ...။
လက်ရှိခေါင်းကိုက်နေတဲ့ ဝေဒနာဆိုးလည်း အမြန်ဆုံး ပျောက်ကင်းသွားပါစေဗျာ....
မိဘကို စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားပြီး ကျေးဇူးဆပ်နိင်တဲ့
အကို့ကို ချစ်တဲ့လူတွေ အများကြီးပဲနော်
22 Jul 09, 08:36
မမခင်လေး: ဖီလင် HAPPY BIRTHDAY TO YOU.. happy birthday to you.. HAPPY BIRTHDAY DREAR "MYOUK MYOUK" happy birthday to youuuuu............ ဖီလင်
22 Jul 09, 08:17
ကိုပိုင်: သူငယ်ချင်းအစစအရာရာ အဆင်ပြေ ပျော်ရွှင် ပါစေ
22 Jul 09, 07:56
မ အနမ်း: Happy Birthday ! ပါ။ ဖိုးစိန် မန့် ခဲ့ပါတယ်။
22 Jul 09, 06:53
မီးမီးချစ်: အီးမေး ပို့ ထားတယ် နော်.. ကြည့်လိုက်အုံး.. ပျော်ရွင်သော မွေးနေ့ပါ..း))
22 Jul 09, 05:49
ဝေါသားလေး: အရမ်းပျော်စရာကောင်းသော မွေးနေ့လေးပါဗျာ.... သူငယ်ချင်း ကိုဖိုးစိန်ရေ... ပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ...
22 Jul 09, 05:40
ပြည့်စုံ: hApPY bIRtHdAY ! ! ! ကိုဖိုးစိန်.... :)
22 Jul 09, 05:00
မေဇင်: Happy Birthday par... ko gyi
22 Jul 09, 04:23
မေတ္တာရောင်ပြန်`: "HAPPY BIRTHDAY MGLAY"
22 Jul 09, 04:08
kiki: HAPPY BIRTHDAY ! ! ! ဖိုးစိန်လေး ရဲ့ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ မွေးနေ့ လေး ဖြစ်ပါစေ ...
ဘဝမှာ မွေးနေ့တွေ လာပြီးရင်...
အမတို့တွေ အတွက် သေနေ့လည်း ရောက်လာဦးမယ်.....
အဲ့ဒီနေ့ ရောက်မလာခင် စပ်ကြား...
မွေးနေ့တိုင်းကို စိတ်ကြည်လင် ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကောင်းမွန်စွာနဲ့ တို့မောင်နှမတတွေ ဖြတ်ကျော်ကြရအောင် မောင်လေးရေ....
ဦးနော် မမခင်လေး ကလေးလေး
ံ Happy Birthday ပါ ကဖိုးစိန်
စိတ်၏ ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်၏ ကျန်းမာခြင်း ပြည့်စုံပြီး လိုရာဆန္ဒ အ၀၀ ပြည့်စုံပါစေလို့ ဖိုးစိန်လေး အတွက် မွေးနေ့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ပါတယ်။
ပျော်ရွှင်ပါစေ ကိုကြီးရေ..အလုပ်ရှုပ်သွားလို့ အတော်လေးနောက်ကျသွားပြီ.. သွေ့ ပုချိပါနော်...း-)
ကိုဖိုးစိန်ရေ မွေးနေ့မှာပျော်ရွှင်ပါစေ။ ၀ိုင်းရဲ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့သူလည်း http://www.politenesskid.co.cc/ မွေးနေ့တူပဲနော်။ ၂ယောက်စလုံးကို ပျော်ရွှင်စရာ နေ့လေးတစ်ရက် ဖြစ်ပါစေကြောင်း ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
22 Jul 09, 10:49
ma phyu: phoe sein.. monkey lay. ဘတ်ဒေး . Happy Birthday !
22 Jul 09, 10:28
May Flower: Happy Birthday ကိုဖိုးစိန် (ရီစရာလေးတွေ များများရေးနိုင်ပါစေ)
22 Jul 09, 10:13
zt: ကိုဖိုးစိန်ရေ။ Happy Birthday ပါ။ ဆိုမယ်
Pwint Myue Zin: Happy Birthday! I saw your foto at Moe Khar's Blog. Really handsome. :P
နွေး: ကိုကြီးစိန်ရေ... HAPPY B'DAY TO U....~~~ ဒီနေ့ မွေးတဲံသူတွေကတယ်ချောဆိုပဲ... :-)
လာတွန်တာဗျို့.. အဲလေ.. ယောင်လို့.. သားက နေရင်းထိုင်ရင်း ကြက်ဖြစ်ဦးမယ်.. လူကိုများ..။
Joyeux Anniversaire à vous ပါ! YUFL ကို ကူလွမ်းပေးသွားပါတယ်.. အမှတ်တရတွေလည်း ဝေမျှသွားပါတယ်..
မွေးနေ့အစီအစဉ် အားလုံးကိုသဘောကျတယ်.. ပျော်ဖို့လည်းကောင်းတယ်.. တစ်ခုပါပဲ.. ဟွန်းးး.. ဘာလဲသိတယ်နော်.. ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ သိပ်ကျေနပ်တာမဟုတ်ဘူး.. သိပ်ပိုလွန်းနေပြီ.. နည်းနည်းလျှော့.. တူကတူနေရာနေပေါ့.. သားထက် တူက တစ်လကြီးချင်နေတယ်ထင်ပါ့ဗျာ.. ဟွင်းးး..
Happy Birthday ပါချစ်စိန်ရေ မွေးနေ့မှသည်နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ ချစ်သောမိသားစုနဲ့ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာ အသက်ထက်ဆုံး နေထိုင်သွားရပါစေလို့နော်
အခု အခု ၅၀ မြောက်ကွန်းမန့်မှာ မကြီးလက်ဆောင်ပေးပါ့မယ်..။
ကိုဖိုးစိန် ၂၉ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ မှသည်
တို့ နဲ့ပြည့်စုံပြီး
မိခင်ဖခင်တို့ အား အကောင်းဆုံး
သားလိမ္မာလေး တစ်ယောက်ဖြစ်ပါစေ လို့ 
22 July 2009 at 17:56
22 Jul 09, 17:56
အရူးလေး: အရက်တစ်ပုလင်းတော့တိုက်နိုင်ပါလိမ့်မရ် ။ ချစ်တဲ့ညီငယ် (အကိုခေါ်နေကျ အရဲလေး ခေါ် အရူးလေး)
အရူးလေး: မိုင်လပ်ဖ်လီးဘရားသားရေ မွေးနေ့မှာပျော်ရွှင်ပါစေ ။ သူများတွေလိုကဒ်တွေဘာတွေမပေးနိုင်လို့စိတ်တော့မကောင်းပါဘူး ။ ရင်ထဲကနှစ်နှစ်ကာကာဆုတောင်းပေးပါတရ် ။ နားလည်နိုင်မှာပါ ။ ညီ့ဆီလာခဲ့ရင် မွေးနေ့အတွက်
22 Jul 09, 17:08
ရွာသားလေးဝိုင်တီယူ: BON ANNIVERSAIRE !
22 Jul 09, 15:44
မိုးခါး: ဂွတ် အီး ဗနင်း .. မကြာခင် ဂွတ်နိုက်တော့မယ် ..း) အိမ်ရှင်ရှိလား
22 Jul 09, 14:58
ဖြိုးဇာနည်: တို့ကျော်ခွပီးရေးရင်းနဲ့့ဆက်လက်မွေးမြူပါတော့မယ်။
ဖြိုးဇာနည်: အဟတ်ဟတ့်နောက်ဆုံးတော့လဲပြန်ရောက်လာရတာပဲ့့ညီပြန်လာပီအကို့ဘလော့လောကထဲကိုပေါ့ တခြားဟာတွေမှာရှာရေးရတာမပျော်ဝူ့းဒီဘလော့စပေါ့ လေးကိုပဲညီသံယောဇဉ်ဖြစ်နေရတာ့ဒါကြောင့်အရင်အိမ်အဟောင်းလေးမှာပဲ့ဇာနည်
22 Jul 09, 14:35
politenesskid: မွေးနေ့မှသည် သက်ထက်ဆုံးပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ
politenesskid: HAPPY BIRTHDAY TO YOU..
သူများတွေကို ပျော်ရွှင်မှုရအောင် အမြဲ
ကိုကြီးလဲ ဘယ်တော့မှစိတ်ညစ် ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။
ကိုကြီးစာတွေ ဖတ်လိုက်ရုံနဲ့ ခင်မင်ဘို့ကောင်းမယ်
ဂျစ် ချစ်ခင်ရတဲ့ ကိုကြီး အမြဲပျော်ရွှင်မှုတွေ ပြည့်ဝနေပါစေလို့ ထပ်ဆုတောင်းပါရစေ....။
ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်း စိတ်၏ချမ်းသာမှုတွေ ထာဝစဉ်
ဦးနော်ကတော့ ထုံးစံအတိုင်း နောက်ဆုံမှ ရောက်လာတယ်.. အရင်ဆုံးဖတ်ပြီး နောက်ဆုံးမှ မန့်ဖြစ်တာက ကော်မန့်တွေကို သေချာ ဖတ်ချင်လို့ပါ..း)
တဂ်ပိုစ့်လေးကို မွေးနေ့ပွဲမှာ ရောရေးပေးတော့ အမှတ်တရပိုဖြစ်တာပေါ့.. ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ ပြောဖို့မလိုပါဘူးနော်..း)
မွေးနေ့အတွက် ဘာမှ အထူးမပေးဖြစ်တာလည်း တူမောင် နားလည်မယ်ဆိုတာ ယုံပြီးသားပါ.. (ပေးလိုက်တာတွေ ရတယ်မလား..!)း)
“စိတ်များနှင့်ကျင်းပသောမွေးနေ့” ဆိုပြီး ဦးနော်တို့ အိမ်က သမီးကလေးလေး ရဲ့မွေးနေမှာ စိတ်တွေထပ်တူကျတာကို လက်တွေ့ကြုံခဲ့ရဘူးတယ်..
အခုလည်း စိတ်တွေ ထပ်တူကျနေတာ မြင်ရပြန်ပြီ...
ကြည့်လိုက်စမ်း တူမောင့်ကို ချစ်တဲ့.. ခင်တဲ့ သူတွေ ဘယ်လောက်များတယ် ဆိုတာ..
ဒါဟာ တကယ်တော့ အံ့သြစရာ တစ်ခုပဲ.. သူတို့တွေ တူမောင့်အနားမှာ မရှိကြဘူးနော်.. တူမောင့်ကိုလည်း မတွေ့ဖူးကြဘူး..
ဒါပေမယ့် သူတို့ရဲ့စိတ်တွေက တူမောင့်ကို သိနေ ခင်နေကြတယ်.. ချစ်နေကြတယ်.. သူတို့တွေ တူမောင့်ရဲ့ မွေးနေ့ပွဲလေးကို စိတ်တွေနဲ့ တက်ရောက်လာကြတယ်..
သူတို့ရဲ့ ကြည်နူးမှုတွေ.. တူမောင့်ရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုတွေ ဒီနေရာမှ ထပ်တူကျနေတယ်..
ဒါဟာ လက်တွေ့ဘဝထက် ကြီးမားကျယ်ပြန့်တဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်မှုတစ်ခုပဲ..
စိတ်တွေနဲ့ ဖြစ်တည်တဲ့ သံယောဇဉ်တွေပဲ..
သေချာတယ် ဒါဟာ မေတ္တာစစ်စစ်တွေ. တူမောင်ရေ ပျော်ရွှင်လိုက်တော့.. သူတို့တွေ ယူဆောင်လာတဲ့ ရင်ထဲက မေတ္တာတွေ.. ရင်ထဲက လက်ဆောင်တွေ.. ရင်ထဲက ဆုတောင်းသံတွေနဲ့ တူမောင့်ရဲ့ မွေးနေ့ပွဲလေးကို ရင်ခုန်ကြည်နူးစွာ ကျင်းပလိုက်တော့..
အဲ့ဒီလို စိတ်ချင်း ဆက်သွယ်မိနေကြပုံကို ကော်မန့်မှာ မအိန္ဒြာ ရေးဖွဲ့ပြသွားတဲ့ “စိတ်ဘွဲ့ရတု” ကဗျာတိုလေးက ပေါ်လွင်နေပါတယ်..
ရင်ဘတ်ထဲကနေ လှိုက်လှဲရင်းနှီးစွာ ချစ်ခင်မိနေပါတယ်..
ဦးနော်နဲ့တီငယ်ကို တံခါးသာ ခေါက်လိုက်..
စိတ်တွေနဲ့ ကျနေတဲ့ စိတ်တွေကို မြင့်တင်ပြမယ်..
စိတ်တွေနဲ့ မျက်ရည်တွေ သုတ်ပေးမယ်..
ခြေလှမ်းတိုင်း.. ဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်း မှန်ကန်နိုင်ပါစေ..
မွေးနေ့အတွက် ပို့စ်ရေးဖြစ်ပေမယ့် ...
အဆင်ပြေသင့်သလောက် အဆင်ပြေပါစေ ..
အဆင်မပြေသေးရင်လည်း အဆင်မပြေသေးတာအတွက် အဆင်ပြေပါစေ ..
အဆင်ပြေသွားရင်လည်း အဆင်ပြေသွားတာအတွက် အဆင်ပြေပါစေ ..
ဖြစ်သမျှကိစ္စတွေနဲ့ ကိုယ့်စိတ်ချမ်းသာမှုဟာ တိုက်ရိုက် အချိုးမညီနေမှန်း နားလည်တဲ့ စိတ်ကို ပိုင်ဆိုင်ပါစေ ...
23 July 2009 at 06:15
တော်တော်လေး လူချစ်လူခင်ပေါတဲ့အကိုကြီးပဲ မွေးနေ့က ပျော်စရာကြီးနော် ၊ မခင်ပေမဲ့ ၀င်ဆုတောင်းသွားပေးတယ်။။။။။ ဒီလိုပဲ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ နောက်နှစ်တွေမှာလည်း ဘလောဂါ မောင်နှမတွေနဲ့ မွေးနေ့ကိုကျင်းပနိုင်ပါစေရှင်
ဆန္ဒနဲ့ဘ၀ ထပ်တူကျပါစေရှင်း)
Maurice Deverreoux said...
ကိုဖိုးစိန်ရေ.... ၅၁ နော်...။ သူများတကာတွေပြောသွားလိုက်တာ ဘာပြောရမှန်းကိုမသိတော့ဘူး ပြောချင်တာ တစ်ခုပဲရှိတယ် စားဖိုမှူးကြီးဖြစ်ပါစေ စားသောက်ဆိုကိုလည်း မိမိကိုယ်တိုင်ဦးစီးပြီ အောင်မြင်တဲ့စားသောက်ဆိုင်ကြီးဖြစ်ပါစေ ဖွင့်နိုင်ပါစေ..။ မွန်ပြည်နယ်သားဆိုတော့သိတဲ့အတိုင်းပဲလေ ခင်မင်စွာဖြင့် စည်သူ။